Oovimba boMbutho wezeMpilo weHlabathi- Ilungelo laseMelika lokwazi
ezaposwa ngomhla Matshi 31, 2019 by UStacy Malkan
Related: Amaxwebhu ayimfihlo abonisa iMfazwe kaMonsanto kwiNzululwazi zeCancer, nguStacy Malkan
Olu xwebhu luchaza imixholo yeMonsanto isicwangciso sonxibelelwano esidlangalaleni Ukuhlazisa icandelo lophando lomhlaza le-World Health Organisation, i-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza (IARC), ukuze kukhuselwe igama leRoundup weedkiller. Ngo-Matshi 2015, iqela lehlabathi leengcali kwiphaneli ye-IARC yagweba i-glyphosate, eyona nto iphambili kwi-Roundup, ukuba ibe mhlawumbi i-carcinogenic ebantwini.
Isicwangciso seMonsanto sichaza ngaphezulu kwamaqela "amaqabane oshishino" amaqela abaphathi beenkampani acwangcise "ukwazisa / ukufaka intsholongwane / ukubandakanya" kwimizamo yabo yokukhusela igama leRoundup, ukuthintela amabango omhlaza "angenasiseko" ekubeni abe luvo oludumileyo, kwaye ukhuseleko kwiarhente zolawulo. ” Abalingane babandakanya izifundiswa kunye neekhemikhali kunye nokutya kumaqela angaphambili, amaqela ezorhwebo kunye namaqela okulinda- landela amakhonkco angezantsi kumaphepha enqaku anikezela ngolwazi oluthe kratya malunga namaqela amaqabane.
Ngokudibeneyo la maphepha ayinyani abonelela ngo-seUbunzulu nobubanzi becandeloUkuhlaselwa kweengcali zomhlaza ze-IARC ekoyiseninse kaMI-onsanto ithengisa kakhulu imveliso yokubulala ukhula.
Iinjongo zikaMonsanto zokujongana nenqanaba le-carcinogenicity ye-IARC yeglyphosate (iphepha 5).
Uxwebhu oluphambili olwakhutshwa ngo-2017 iinkqubo zomthetho ngokuchasene neMonsanto ichaza iqumrhu “lokuzilungiselela kunye nesicwangciso sokuzibandakanya” sokuhlelwa komhlaza we-IARC we-glyphosate, umhlaba ezisetyenziswa ngokubanzi kwezolimo. Inkqubo ye- uxwebhu lwangaphakathi lweMonsanto Ngomhla kaFebruwari 23, 2015-yabela abasebenzi abangaphezulu kwe-20 beMonsanto kwiinjongo ezibandakanya "ukunciphisa impembelelo yesigqibo," "ukufikelela kumlawuli," "ukuqinisekisa iMON POV" kunye "nelizwi eliphambili 'kwi-IARC' kunye ne-2B ingqumbo." Ngomhla wamashumi amabini ku-Matshi 20, i-IARC yabhengeza isigqibo sayo sokuhlela i-glyphosate njengeqela lesibini le-carcinogen, "mhlawumbi i-carcinogenic ebantwini. "
Ngolwazi oluthe kratya, bona:Yenziwe njani iMonsanto yokucaphuka kulwahlulo lomhlaza wemichiza ekulindelwe ngayo,”NguCarey Gillam, eHuffington Post (9/19/2017)
Inqanaba lesi-1 leMonsanto “Amaqabane oShishino”
Iphepha 5 le uxwebhu lweMonsanto ichonga amanqanaba amane "amaqabane oshishino" athi abaphathi beMonsanto bacwangcise ukuzibandakanya kwisicwangciso sokulungela i-IARC. La maqela ngokudibeneyo anokufikelela ngokubanzi kunye nefuthe ekutyhaleni ingxelo malunga nomngcipheko womhlaza okhusela iinzuzo zeshishini.
Inqanaba loku-1 lamaqabane eshishini ngamagunya okuxhasa ngemali kwezolimo kunye namaqela e-PR.
ICropLife yaMazwe ngaMazwe / uMbutho woKhuseleko lweZityalo waseYurophu Ngamaqela orhwebo lwezibulali zinambuzane
Iimpendulo zeGMO yindawo yokulawula intlekele yewebhusayithi exhaswa yiMonsanto, iBASF, iBayer, iDow, iDupont kunye neSyngenta kwaye ziqhutywa Ifekthum yobudlelwane boluntu
Umbutho weBiotechnology Innovation Umbutho liqela lezorhwebo le-biotech
Inqanaba lesi-2 kumaqabane oshishino ngamaqela angaphambili ahlala ekhankanywa njengemithombo ezimeleyo, kodwa asebenze nomzi mveliso weekhemikhali ngasemva kobudlelwane boluntu kunye namaphulo okuphembelela.
Ingqondo malunga neNzululwazi
IProjekthi yokuFunda ngokuBhala
Inqanaba lesithathu labalingane kushishino kukutya okufumana inkxaso-mali kunye namaqela orhwebo. La maqela athatyathwa athi, "Lumkisa iinkampani zokutya ngeqela labathathi-nxaxheba (IFIC, GMA, CFI)" ngecebo lokutofa "ukubonelela ngemfundo yokuqala kumanqanaba entsalela ye-glyphosate, chaza izifundo ezisekwe kwinzululwazi xa kuthelekiswa ne-ajenda eqhutywa zii-ajenda” yomhlaza ozimeleyo. iphaneli.
IBhunga leLizwe loLwazi ngezoKutya (IFIC) Liqela elijikelezayo elixhaswa ngemali lishishini lokutya elikhokelela kumdibaniselwano wamaqela angama-130 alungelelanisa umyalezo malunga nee-GMO kunye neyeza lokubulala izitshabalalisi.
Umbutho wabavelisi bokutya (GMA) lelona qela lezorhwebo elikhokelayo kwiinkampani zokutya okungenampilo.
IZiko lokuDibanisa ukuTya (i-CFI) liqela elijikelezayo elixhaswa ngemali lishishini lokutya.
Amahlakani emizi-mveliso emi-4 “yeyona mibutho iphambili yabalimi.” La ngamaqela orhwebo ahlukeneyo amele umbona, isoya kunye nabanye abalimi bemizi mveliso kunye nabenzi bokutya.
Ukulungisa isikhalazo ngokuchasene nengxelo yomhlaza kwi-glyphosate
Uxwebhu lwe-Monsanto PR luchaze izicwangciso zabo zokuqhuba imithombo yeendaba eyomeleleyo kunye namajelo eendaba ezentlalo ukuze "kulungiswe izikhalazo ngesigqibo se-IARC."
Indlela edlalwe ngayo inokubonwa kwimibhalo yeqabane loshishino amaqela asebenzise imiyalezo eqhelekileyo kunye nemithombo yokutyhola iarhente yophando ngomhlaza ngokungalunganga kwaye bezama ukujongela phantsi izazinzulu ezazisebenza kwingxelo yeglyphosate.
Imizekelo yemiyalezo yokuhlaselwa inokubonwa kwiwebhusayithi yeProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala. Eli qela libanga ukuba ngumthombo ozimeleyo kwisayensi, nangona kunjalo, amaxwebhu afunyenwe ngumboniso waseLungelo laseMelika lokuLwazi Iprojekthi ye-Genetic Literacy Project isebenza neMonsanto kwiiprojekthi ze-PR ngaphandle kokuchaza ezo ntsebenziswano. UJon Entine wasungula iqela ngo-2011 xa uMonsanto wayengumthengi we-PR firm. Eli liqhinga leqela eliphambili; ukuhambisa imiyalezo yenkampani kwiqela elibanga ukuba lizimele kodwa alinjalo.
Isicwangciso sicebisa iSense malunga neNzululwazi ukuba "ikhokele ekuphenduleni kwimizi-mveliso"
Uxwebhu lwe-Monsanto PR luxoxa ngezicwangciso zokwenza imithombo yeendaba eyomeleleyo kunye namajelo eendaba ezentlalo ukuze "kwenziwe isikhalazo ngesigqibo se-IARC." Isicwangciso sicebisa iqela leNzululwazi malunga neNzululwazi (kubakaki abanophawu lombuzo) ukuba "likhokele impendulo kumzi-mveliso kwaye libonelele ngeqonga lababukeli be-IARC kunye nesithethi seshishini."
Ingqondo malunga neNzululwazi luthando loluntu olusekwe eLondon amabango ku ukukhuthaza ukuqonda koluntu kwezenzululwazi, kodwa iqela "liyaziwa ngokuthatha indawo Ukuvumelana kwesayensi okanye ukubugxotha ubungqina obuvelayo bengozi, ”Uxele njalo uLiza Gross kwiThe Intercept. Ngo-2014, iSense malunga neNzululwazi yaqalisa inguqulelo yase-US phantsi kolawulo lwe UTrevor Butterworth, umbhali onembali ende yokungavumelani inzululwazi ephakamisa iinkxalabo zempilo malunga neekhemikhali eziyityhefu.
Ingqondo malunga neNzululwazi inxulumene ne Iziko leMedia Media, iarhente yesayensi ye-PR eLondon efumana inkxaso-mali yokusebenzisana kwaye iyaziwa ukutyhala iimbono ezihlanganisiweyo zesayensi. Intatheli ene sisondelelene neZiko leMithombo yeendaba, UKate Kelland, upapashe amanqaku aliqela kwiReuters egxeka iarhente yomhlaza ye-IARC eyayisekwe kuyo amabali obuxoki kwaye ingxelo engachanekanga engagqitywanga. Amanqaku eReuters akhuthazwe kakhulu ngamaqela eMonsanto “amaqabane eshishini” kwaye asetyenziswa njenge isiseko se Uhlaselo lwezopolitiko ngokuchasene neIARC.
"IARC iyalikhaba ibango elingelilo kwinqaku leReuters," Isiteyitimenti se-IARC (3 / 1 / 18)
Ibali leReuters 'lika-Aaron Blair IARC likhuthaza ingxelo engeyonyani, I-USRTK (7 / 24 / 2017)
Ibango lika-Reuters lokuba i-IARC "ihleliwe ngaphandle" Iziphumo aziyonyani, I-USRTK (10 / 20 / 2017)
"Ngaba ubudlelwane obudibeneyo buchaphazela isayensi?" Ukulingana nokuchaneka kokuBika (7 / 24 / 2017)
“Zibandakanye noHenry Miller”
Iphepha 2 loxwebhu lwe-Monsanto PR luchaza okokuqala okunikezelwa ngaphandle ekucwangcisweni nasekulungiseleleni: "Ukubandakanya uHenry Miller" ukuze "kugonywe / kusekwe umbono woluntu malunga ne-IARC kunye nokuphononongwa."
"Ndingathanda ukuba ndiqale ngoyilo olusemgangathweni ophezulu."
UHenry I. Miller, MD, olilungu leziko le-Hoover kunye nomlawuli osungula iOfisi ye-FDA ye-Biotechnology, une imbali ebhaliweyo Ukusebenza namaqumrhu ukukhusela iimveliso ezinobungozi. Isicwangciso seMonsanto sichonga "umnini we-MON" womsebenzi njengo-Eric Sachs, isayensi kaMonsanto, itekhnoloji kunye nokukhokelela kufikelelo.
Amaxwebhu kamva ixelwe yiThe New York Times kutyhila ukuba iiSachs Imeyile Miller kwiveki phambi kwengxelo ye-IARC glyphosate ukubuza ukuba uMiller unomdla wokubhala malunga "nesigqibo esinempikiswano." UMiller uphendule wathi, "ndingathanda ukuba ndiqale ngomgangatho ophezulu." Ngo-Matshi 23, uMiller uthumele inqaku KwiForbes "eboniswe ikakhulu" uyilo olunikezwe nguMonsanto, ngokwe Times. IForbes yaqhawula ubudlelwane bayo noMiller emva kwesikrokro sokubhala ghost kunye ucime amanqaku akhe kwiziko.
Nangona uxwebhu lwe-Monsanto PR alukhange luthiye igama Ibhunga laseMelika elixhaswe ngemali liSayensi kunye neMpilo (ACSH) phakathi "kwamaqabane eshishini," ii-imeyile ezikhutshwe ngesimangalo zibonisa ukuba iMonsanto Ixhaswe ngemali liBhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo kwaye lacela iqela ukuba libhale ngengxelo ye-IARC glyphosate. Iimeyile zibonisa ukuba abaphathi beMonsanto babengakhululekanga ngokusebenza ne-ACSH kodwa benza njalo kuba, "asinabalandeli baninzi kwaye asinakukwazi ukuphulukana nabambalwa esinabo."
Inzululwazi ephezulu kaMonsanto uDaniel Goldstein ubhalele oogxa bakhe, "Ndiyakuqinisekisa ukuba andijongelwa yonk 'into nge-ACSH- banenqwaba yeentsumpa- kodwa: AKUYI KUFUMANA IXABISO ELINGCONO KWI-DOLLAR YAKHO kune-ACSH" (ugxininiso lwakhe). UGoldstein wathumela amakhonkco kwizixhobo ezininzi ze-ACSH ezikhuthaza zikhusela ii-GMO kunye nezibulala-zinambuzane awazichaza ngokuba “ziluncedo kakhulu.”
Bona kwakho: Ukulandelela iNethiwekhi yezoLimo yezoLimo
Landela iziphumo ze-US Right to Know kunye nemithombo yeendaba malunga nokusebenzisana phakathi kwamaqela oshishino lokutya kunye nabahlohli iphepha lethu lophando. Amaxwebhu e-USRTK ayafumaneka kwi ILayibrari yamaXwebhu amaShishini amaKhemikhali isingathwe ngu-UCSF.
Ukutya kwengqondo, GMO, Uphando lwethu, Pesticides "ihlelwe ngaphandle" glyphosate, UAaron Blair, zifundo, Uphengululo lwezifundo, AgBioChatter, Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, I-BASF, Bayer, Bio, Ukuhlaziywa, Umbutho weBiotechnology Innovation Umbutho, I-CFI, CLI, UDick Taverne, Dow, dupont, U-Eric Sachs, Umbutho woKhuseleko lweZityalo waseYurophu, IProjekthi yokuFunda ngokuBhala, GMA, Iimpendulo zeGMO, Henry Miller, Iziko leHoover, IARC, IFIC, ma shishini, UKate Kelland, Ifekthum yobudlelwane boluntu, IMonsanto, Reuters, Iziko leMedia Media, Ingqondo malunga neNzululwazi, ISyngenta, UTrevor Butterworth, World Health Organization
Incoko phakathi kweCoca-Cola kunye neCDC
ezaposwa ngomhla January 29, 2019 by UGary Ruskin
Ikota yeMilbank: Iintlanganiso zikawonke-wonke zabucala: Incoko phakathi kweCoca-Cola kunye neCDC, NguNason Maani Hessari, uGary Ruskin, uMartin McKee kunye noDavid Stuckler (1.29.19)
Ukuqukumbela: “Iimeyile esizifumene sisebenzisa izicelo ze-FOIA zityhila iinzame zikaCoca-Cola zokuphembelela iCDC ukuba iqhubele phambili iinjongo zeshishini endaweni yezempilo, kubandakanya nefuthe kuMbutho wezeMpilo weHlabathi. Iziphumo zethu zibonelela ngomzekelo onqabileyo weendlela inzame zorhwebo eziphembelela ngayo amagqirha ezempilo 'ngamazwi abo,' kwaye babonisa isidingo semigaqo-nkqubo ecacileyo yokuphepha ukusebenzisana nabenzi beemveliso eziyingozi. ”
The Ilungelo lase-US lokwazi ingqokelela yamashishini okutya, equkethe ii-imeyile zeCoca-Cola kunye neCDC, iposwe simahla, inokukhangelwa Uvimba-mpepha wamaxwebhu okutya e-UCSF.
Amakhosikazi eCongress abiza ukuba kwenziwe uphando
Ukukhutshwa kweendaba: I-Pingree, i-DeLauro ukuya kwi-HHS yoMhloli Jikelele: Phanda i-Coca-Cola's Lobbying ye-CDC (2.4.19)
Ileta eya kuMhloli-Jikelele we-HHS uDaniel Levinson (2.4.19)
Isaluni: Amakhosikazi amabini ebandla afuna uphando malunga nobudlelwane obugwenxa beCDC neCoca-ColaNguNicole Karlis (2.5.19)
Ukuhanjiswa kweendaba ngesifundo seKota seMilbank
I-Washington Post: Ii-imeyile zeCoca-Cola zityhila ukuba iShishini leSoda lizama njani ukuPhembelela amaGosa ezeMpiloNguPaige Winfield Cunningham (1.29.19)
Imithombo yeendaba edibeneyo: Umzi mveliso wokutya uhambela impilo yoluntu ufumana uvavanyo olutshaNguCandace Choi (1.29.19)
politico: I-Coca-Cola izame ukuphembelela i-CDC kuPhando kunye noMgaqo-nkquboNguJesse Chase-Lubitz (1.29.19)
Isaluni: Iimeyile ezintsha zibonisa ukuba abasebenzi beCDC benza ibhidi yeCoca-Cola, nguNicole Karlis (2.1.19)
Umama uJones: U kufunda: Ii-imeyile zibonise ukuba iCoca-Cola izame njani ukuphembelela uMgaqo-nkqubo wezeMpilo weHlabathi, nguKari Sonde (2.1.19)
Ijenali yoMgaqo-siseko waseAtlanta: I-Coke kunye ne-CDC, ii-icon zeAtlanta, zabelana ngolwalamano oluhle, ii-imeyile zibonisa, NguAlan Judd (2.6.19)
Ijenali enxulumene noko kunye namanqaku eendaba
I nzu lulwazi: Abenzi bomthetho baseMelika bafuna i-NIH kunye ne-CDC iziseko zokuba bathethe ngakumbi malunga nabaxhasiNguJeffrey Mervis (6.29.18)
BMJ: Amaziko oLawulo noThintelo lweZifo: Ngaba ukukhusela iZinto zaBucala? NguJeanne Lenzer (5.15.15)
Uhlobo loPhando: Ifemi ihlawula uRhulumente ukuba acele umngeni kuPhando lweziyobisiNguSheila Kaplan (3.1.11)
BMJ: I-arhente yezempilo yoluntu yase-US yamangalela ngokusilela ukukhupha ii-imeyile ezivela kwiCoca-ColaNguMartha Rosenberg (2.28.18)
I-San Diego Union Tribune: I-UCSD iqesha umphandi wezempilo oxhaswa ngemali nguCokeNguMorgan Cook (9.29.16)
Ukunika ingxelo ngakumbi ngefuthe likaCoca-Cola
Ijenali ye-Epidemiology kunye neMpilo yoLuntu: Imibutho yezenzululwazi kunye 'nemfazwe' kaCoca-Cola kunye noluntu lwempilo yoluntu: ukuqonda okuvela kuxwebhu lweshishini lwangaphakathiNguPepita Barlow, uPaulo Serôdio, uGary Ruskin, uMartin McKee noDavid Stuckler (3.14.18)
Impilo yoLuntu ebalulekileyo: Iinkampani zokutya zibuchaphazela njani ubungqina kunye noluvo-ngqo ukusuka emlonyeni wehashe, nguGary Sacks, uBoyd A. Swinburn, uAdrian J. Cameron noGary Ruskin (9.13.17)
BMJ: Impembelelo eyimfihlo kaCoca-Cola kwiintatheli zonyango kunye nezesayensi, NguPaul Thacker (4.5.17)
politico: Igosa eliphezulu lezempilo likaTrump lathengisa isitokhwe secuba ngelixa likhokelela kwimizamo yokulwa ukutshayaNguSarah Karlin-Smith noBrianna Ehley (1.30.18)
ENew York Times: INkosi entsha ye-CDC yabona uCoca-Cola njengo-Ally kuMlo wokuTyeba kakhuluNguSheila Kaplan (7.22.17)
Imithombo yeendaba edibeneyo: I-imeyile ityhila indima kaCoke kwiqela lokulwa nokutyeba, nguCandice Choi (11.24.15) kunye Amagqabantshintshi avela kwiimeyile phakathi kweCoke kunye neNethiwekhi yeLizwe yokuLingana kweMandla
ENew York Times: Iingxowa-mali zeCoca-Cola zeNzululwazi eziTyhola ityala lokuTyeba kakhulu kude nokutya okungalunganga, NguAnahad O'Connor (8.9.15)
Amanqaku eendaba ngabasebenzi base-US belungelo lokwazi
Hill: Yintoni eyenzekayo kwicDC? Ukuziphatha kwearhente yezempilo kufuna ukujongwa, NguCarey Gillam (8.27.16)
Iposi likaHuffington: Amaqhina amaninzi eCoca-Cola abonwa ngaphakathi kwamaziko aseMelika oLawulo lweZifo, NguCarey Gillam (8.1.16)
Iposi likaHuffington: I-Arhente yokuPhuma ngokusemthethweni kwe-CDC emva koNxibelelwano lweCoca-Cola iza ekuKhanyeni, NguCarey Gillam (6.30.16)
Iposi likaHuffington: Umzi mveliso woTywala ufumana uMhlobo ngaphakathi kweArhente yezeMpilo yaseMelika, NguCarey Gillam (6.28.16)
Forbes: Inethiwekhi yeCoca-Cola: Unxibelelwano lweMigodi yeSoda Giant Kunye namagosa kunye nooNzululwazi ukuPhembelela, NguRob Waters (7.11.17)
Forbes: Ukukhethwa kukaTrump ukuya kwiNtloko ye-CDC edibene neCoke, iiNdawo eziQinisekayo zokuQinisa iiArhente kwiSoda Giant, NguRob Waters (7.10.17)
Ilungelo lase-US lokwazi ngummangali kwityala le-FOIA ngokubhekisele kwi-CDC
I-CrossFit kunye ne-US Ilungelo lokwazi balimangalela iSebe lezeMpilo kunye neNkonzo zoLuntu Ukufuna iirekhodi zokuba kutheni iSiseko saMaziko aSizwe kuLawulo noThintelo lweZifo (iCDC Foundation) kunye neSiseko samaZiko ezeMpilo kaZwelonke (iSiseko se-NIH) khange achaze ulwazi malunga nabanikeli njengoko kufunwa ngumthetho. (10.4.18)
Impembelelo yeCoca-Cola / ILSI kwi-CDC e-China
ENew York Times: ZiyiChummy njani izigebenga zokutya okungenamsoco kunye namagosa ezempilo eTshayina? Babelana ngeeOfisiNgu-Andrew Jacobs (1.9.19)
Ijenali yoMgaqo-nkqubo weMpilo kaRhulumente: Umzi mveliso weSoda uchaphazela isayensi nokutyeba kakhulu e-ChinaNguSusan Greenhalgh (1.9.19)
BMJ: Ukwenza iChina ikhuseleke kwiCoke: Coca-Cola wayenza njani inzululwazi yokutyeba kakhulu kunye nomgaqo-nkqubo e-ChinaNguSusan Greenhalgh (1.9.19)
BMJ: Amandla afihliweyo eenkampaniNguMartin McKee, uSara Steele noDavid Stuckler (1.9.19)
I-CDC FOIA yoxwebhu lwamaqela
(1) ICDC Bowman Malaspina
(3) ICDC Culbertson Ryan Liburd Galuska
(4) ICDC Bowman Stokes 2018
Amanye a maxwebhu
(1) I-CDC SPIDER ileta
(2) Ii-imeyile ezintathu zikaBarbara Bowman
Umsebenzi wezifundo, Abangcamli anti-ukutyeba, Centres for Disease Control and Prevention, Inkampani yeCoca-Cola, indibaniselwano, CrossFit, UGary Ruskin, I-GEBN, ukunyanya, impilo yoluntu, Ilungelo lase-US lokwazi, World Health Organization
I-AgBioChatter: Apho amaShishini, isiCwangciso esiCwangcisiweyo sezeMfundo kwi-GMOs, i-Pesticides
ezaposwa ngomhla Ngamana 31, 2018 by UStacy Malkan
I-AgBioChatter iluhlu lwe-imeyile yangasese esetyenziselwa imboni yezolimo kunye nabadibaniselwano bayo ukulungelelanisa imiyalezo kunye nemisebenzi yokuphembelela. Uluhlu lwamalungu lubandakanya izifundiswa ezixhasa ushishino, abasebenzi bezolimo abaphezulu kunye nabasebenza nolwalamano noluntu.
le uxwebhu lwangaphakathi lweMonsanto ichonga “Izifundo (AgBioChatter)” njengeNqanaba 2 “iqabane loshishino” kwisicwangciso sobudlelwane esidlangalaleni sikaMonsanto sokujongela phantsi iArhente yeHlabathi yezeMpilo yoPhando ngomhlaza (IARC), ukuze kukhuselwe igama leRoundup weedkiller. Ngo-Matshi 2015, i-IARC yagweba i-glyphosate, eyona nto iphambili kwi-Roundup, ukuba ibe yiyo mhlawumbi i-carcinogenic ebantwini.
Izifundo ezininzi zeAgBioChatter zikwadlala indima ebalulekileyo kwamanye amaqabane "kushishino" abhalwe kwisicwangciso se-Monsanto's PR sokujongela phantsi ingxelo ye-IARC ye-carcinogenicity, kubandakanya Iimpendulo ze-GMO, Ukufa, IProjekthi yokuFunda ngokuBhala, Uphengululo lwezifundo kwaye Ingqondo malunga neNzululwazi.
imvelaphi: IMonsanto ithembele kula "maQabane" ekuhlaseleni iiNzululwazi eziPhezulu zeCancer
Ii-imeyile zeAgBioChatter ezidityaniswe apha ngezantsi- kunye namanye amaxwebhu afunyenweyo ngu-US Ilungelo lokwazi kwaye ngoku isingathwe kwi Uvimba wamaXwebhu amaCandelo oMbane we-UCSF -Bonelela ngemizekelo emininzi yendlela amahlakani ezifundo kunye namahlakani eshishini asebenza kunye ngeendlela ezifihlakeleyo zokutyhala imiyalezo ehambelana nomzi mveliso kumaqonga awahlukeneyo ukwenza ukuthandabuza malunga nomngcipheko wezempilo kunye nokusingqongileyo kwemichiza yokubulala izitshabalalisi kunye nee-GMO.
Iindawo zemithombo yeendaba kwihlabathi liphela banike ingxelo ngezi zinto zenziwe zangumdibaniso zokukhuthaza imbono zeshishini lenzululwazi kunye nokuchasa imigaqo.
Isicelo seerekhodi zoluntu kwi-AgBioChatter
Ilungelo lase-US lokwazi ukufumana ii-imeyile ze-AgBioChatter ngo-2016 nango-2017 ngesicelo seerekhodi zoluntu. NgoJulayi 2017, i-US Ilungelo lokwazi wamangalela iYunivesithi yaseFlorida ngenxa yokusilela kwayo ukukhupha iirekhodi zoluntu ezibandakanya ushishino lwezolimo kunye noonjingalwazi abaxhaswa ngezimali esidlangalaleni, kubandakanya namaxwebhu avela kwiforum yeAgBioChatter.
Ngo-Matshi ngo-2018, ijaji yaseFlorida yalichitha elityala, isithi ii-imeyile zeAgBioChatter “bezizezomntu ozelwe (noKevin Folta) yena” hayi ishishini leyunivesithi. Ngolwazi oluthe kratya, bona maxwebhu enkundla.
Inkcazo ehambelana neendaba
Inkululeko yeCandelo loPhuhliso, "Indlela amashishini ekucinezela ngayo ukuxelwa kweerekhodi zoluntu malunga nawo," nguCamille Fassett (2/27/18)
Inqaku leNew York Times, "Ishishini lokutya libhalise iiFundics kwi-GMO ilebheli yemfazwe, ii-imeyile Show," ngu-Eric Lipton; kwaye ugcino lwemeyile, "UNjingalwazi waseFlorida usebenza noShishino lweBiotech" (9/5/2015)
Alternet, "Ngaba kukho into eyintlanzi eqhubekayo phakathi kweDyunivesithi yaseFlorida kunye nomzi mveliso wezolimo? Abathengi banelungelo lokwazi, ”nguDaniel Ross, Alternet (2/13/18)
Uluhlu lomxholo weAgBioChatter
The Ii-imeyile zeAgBioChatter zifunyenwe ngokusebenzisa izicelo zerekhodi zikarhulumente (iphepha le-142) zibonisa izifundiswa kunye nabasebenzi bezolimo bezolimo beququzelela amanqaku okuthetha ngokuchasene nokubhalwa kwe-GMO, ukukhuthaza nokukhusela ii-GMO kunye nezibulala-zinambuzane, ukugxeka imboni, kunye nokuphepha izicelo zoMthetho weNkululeko yoLwazi malunga nabafundisi-mali abaxhaswa ngurhulumente.
Umxholo ophambili wee-imeyile (kwaye ngakumbi indima yoluhlu lwamalungu uJay Byrne, owayesakuba ngumlawuli kunxibelelwano lweshishini lweMonsanto) yayikukuchonga abagxeki bemveliso yezolimo kunye namathuba okubahlasela. Oku kubandakanya uMehmet Oz, uVandana Shiva, uDon Huber, uManyano lwaBathengi nabanye.
Omnye umxholo ophambili kwii-imeyile ze-AgBioChatter ngumzamo wokumisela izifundo zesayensi eziphakamisa inkxalabo malunga nemingcipheko ye-GMO kunye ne-pesticides njenge "eqhutywa yi-ajenda," ngelixa izifundo ezinika ingxelo entle malunga neemveliso zeshishini lezolimo "zenzululwazi yesayensi."
Ezemfundo, intsebenziswano kumzi-mveliso
Ngokwee-imeyile ezifunyenweyo ukuza kuthi ga ngoku kusetyenziswa izicelo zeerekhodi zikarhulumente, izifundiswa, abasebenzi bezolimo, abacebisi kunye nabasebenzi be-PR bathathe inxaxheba kuluhlu lwe "Chatter".
Abathathi-nxaxheba abaziwayo badweliswe apha ngezantsi kunye neqhina labo kwenye Amaqela “amaqabane kushishino” igama kwisicwangciso se-PR sikaMonsanto ukuya cwangcisa isikhalo ngokuchasene neqela lomhlaza le-IARC. Ngolwazi oluthe kratya ngala maqela, jonga amaphepha ethu enyaniso:
Uphengululo lwezifundo: ukwenziwa kwecandelo eliphambili loshishino
I-Biofortified kunye noMatshi ngokuchasene neentsomi malunga nokuGuqulwa
IProjekthi yokuFunda ngokuBhala amaqabane neMonsanto ukukhuthaza ii-GMO
Iimpendulo zeGMO yiwebhusayithi yentengiso exhaswa ngemali ngumzi mveliso
Ingqondo malunga neNzululwazi ijikelezisa isayensi kwishishini
Kukwaphawulwe apha ngezantsi ngamaqhina kwi- Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, iqela eliphambili elifumana imali ehlanganisiweyo ukukhuthaza imbono zeshishini lenzululwazi kwaye bahlasele abagxeki.
Uqhakamshelwano loovimba beProjekthi yemfuzo yokuFunda nokuBhala lubonelela ngemiyalezo eqhelekileyo, ephindaphindwayo yokuthumela imiyalezo kula maqela angaphambili kunye nokufundiswa kwabafundi ukukhuthaza ii-GMO kunye nemichiza yokubulala izitshabalalisi, ukuzama ukugxeka abagxeki, ukuphikisa ucwangco kunye nokuchasa iinzame zokungafihli nto.
Uluhlu lwamalungu e-AgBioChatter
Ii-imeyile ezifunyenwe ngokusebenzisa iirekhodi zikarhulumente zibonisa ukuba aba bantu balandelayo bakuluhlu lwe-AgBioChatter njengemihla ekwii-imeyile.
UAndrew Apel, icandelo lezolimo Umcebisi kunye nomhleli wangaphambili kwincwadana yeendaba zebhayoloji AgBiotech Reporter
UGraham Brooks, Uqoqosho lwezoLimo, i-PG Economics Ltd, e-UK
Iimpendulo zeGMO profile
Umvavanyi, uphononongo lwezifundo ingxelo uhlaselo organic
IProjekthi yokuFunda ngokuBhala Zovimba
UJay Byrne, owayesakuba ngumlawuli wonxibelelwano lwendibaniselwano yeMonsanto; umongameli we v -Ukusebenzisana okusebenzayo ubudlelwane kwezoluntu
Uncedwe ukuseta uphononongo lwezifundo njenge Iqela eliphambili leMonsanto
Usebenze neMonsanto ukuya phuhlisa uluhlu ekujoliswe kulo Abagxeki be-GMO ukuba bahlasele
Umnyhadala weendaba ohleliweyo I-Nobel Laureates ukuhlasela iGreenpeace
UBruce Chassy, ​​PhD, UNjingalwazi uEmeritus woKhuseleko loKutya kunye neNzululwazi ngezeMpilo, iYunivesithi yaseIllinois eUrbana-Champaign
Uphando lweWBEZKutheni le njingalwazi kwakungekho mfuneko yokuba ichaze inkxaso-mali yeGMO?
Uphengululo lwezifundo umququzeleli kunye nomlawuli
Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo ibhodi yabacebisi
UJon Entine, Umlawuli weProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala, iMonsanto “iqabane kushishino”
Uxwebhu lwenyani lwe-USRTK: I-Jon Entine kunye neProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala ngokujikeleza ishishini leekhemikhali PR
Incwadi ebhaliweyo Ukhusela isibulali-zinambuzane saseSyngenta atrazine, esapapashwa liBhunga laseMelika lezeNzululwazi nezeMpilo iqela eliphambili loshishino ifunyenwe Inkxaso mali evela eSyngenta
Iimpendulo zeGMO umbutho weqela lesithathu
UKevin Folta, PhD, UNjingalwazi kunye noSihlalo, iSebe lezeNzululwazi yeHorticultural, iYunivesithi yaseFlorida
Uphando lweNew York TimesUmzi mveliso wokutya ubhalise izifundiswa kwimfazwe yelebhile ye-GMO, ii-imeyile zibonisa
Uxwebhu lwenyani lwe-USRTK kwiKevin Folta
Iimpendulo zeGMO ummeli
Ilungu lebhodi eqinisekisiweyo, 2015-2018
I-Val Giddings, iPhD, Umcebisi kumzi-mveliso, owayesakuba ngu-VP wombutho wezorhwebo we-BIO
Umntu ophezulu kwi-Information Technology kunye ne-Innovation Foundation (exhaswa ngemali ngamayeza, ngaphandle kwamacingo kunye namaqela oshishino ngezolimo)
UAndy Hedgecock, UDuPont Pioneer owayengumlawuli kwimicimbi yezenzululwazi
Iimpendulo zeGMO ingcali evelele
UDrew Kershen, PhD, UNjingalwazi we-Emeritus, kwiDyunivesithi yase-Oklahoma, kwiKholeji yoMthetho
Uxwebhu lwenyani lwe-USRTK malunga noDrew Kershen
Ilungu leBhodi le IProjekthi yokuFunda ngokuBhala kunye neProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala yeSayensi
Uphengululo lwezifundo nobhala, 2016
UMarcel Kuntz, PhD, Umlawuli wophando e-CNRS, Laboratoire de Physiologie Cellulaire Végétale, Grenoble, France
UChris Leaver, PhD, U-Emeritus uNjingalwazi weSayensi yezityalo, iYunivesithi yaseOxford
Ingqondo malunga neNzululwazi Ibhunga leengcebiso
Umbhali weSense malunga neNzululwazi Ingxelo yeGMO
Adrienne Massey, PhD, Umbutho woShishino lweBiotechnology (i-BIO), umlawuli olawulayo wesayensi kunye nemicimbi yolawulo
URobert McGregor, Umhlalutyi womgaqo-nkqubo, Isiqithi sasePrince Edward, eCanada
UAlan McHughen, PhD, KwiYunivesithi yaseCalifornia Riverside
UHenry Miller, MD, Umntu waseHoover Institution, owayesakuba yi-FDA kwi-biotechnology
Uphando lweNew York Times utyhile inqaku elipapashwe nguMiller eForbes ebhalwe ghost nguMonsanto
Uxwebhu lwenyani lwe-USRTK kuHenry Miller
UVivian Moses, PhD, Icandelo leSwekile kunye neNzululwazi ngezeNzululwazi, eKing's College yaseLondon
UPiero Morandini, PhD, umncedisi wophando, KwiYunivesithi yaseMilan
UWayne Parrott, PhD, UNjingalwazi, ukuZala izityalo kunye neGenetics, kwiDyunivesithi yaseGeorgia
CS Prakash, PhD, UNjingalwazi, i-Plant Genetics, i-Genomics kunye ne-Biotechnology College yezoLimo, i-Environmental and Nutrition Sciences, iYunivesithi yaseTuskegee
Ukumiselwa “Uluntu lwe-AgBioWorld” kunye Ukhuphiswano lweShishini
UCami Ryan, PhD, IMonsanto, inzululwazi yezentlalo zikhokelela, imigaqo-nkqubo yolawulo kunye nemicimbi yesayensi eCanada
UEric Sachs, PhD, IMonsanto, okusingqongileyo, intlalo nezoqoqosho zikhokela iqonga
Uncedisiwe ukuseta Uphengululo lwezifundo njengeqela langaphambili lokuhlasela abagxeki
UAlison Van Eenennaam, PhD, I-Animal Genetics kunye ne-Biotechnology Cooperative Extension Specialist, kwiDyunivesithi yaseCalifornia, eDavis
Ukuvela kokutya ifilimu yepropaganda
UKarl Haro von Mogel, PhD, Umlawuli we-Biofortified wenzululwazi kunye neendaba
Uxwebhu lwenyani lwe-USRTK malunga Ukuhlaziywa
Ngolwazi oluthe kratya malunga nokufunyenwe kwe-US Right to Know kunye nemithombo yeendaba malunga nokusebenzisana phakathi kwamaqela oshishino kunye nabahlohli kwimicimbi yokutya, yabona iphepha lethu lophando. Amaxwebhu aseLungelo lokuFunda lase-US ayafumaneka kwi- ILayibrari yamaXwebhu amaShishini amaKhemikhali isingathwe yiYunivesithi yaseCalifornia, eSan Francisco.
Ukutya kwengqondo, GMO, Uphando lwethu, Pesticides zifundo, Uphengululo lwezifundo, UAdrienne Massey, AgBioChatter, Ingxelo yeAgBiotech, Uluntu lweAgBioWorld, Uqoqosho lwezoLimo, UAlan McHughen, UAlison Van Eenennaam, Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, UAndrew Apel, UAndy Hedgecock, Umbutho wezorhwebo we-BIO, Ukuhlaziywa, UBruce Chassy, CS Prakash, UCami Ryan, UChris Leaver, I-CNRS, Ikholeji yezeNdalo yezoLimo kunye neNzululwazi yeTyunivesithi yaseTuskegee, Ukhuphiswano lweShishini, Ukuzalela izityalo kunye neYunivesithi yaseGeorgia, Icandelo leSwekile kunye neNzululwazi ngezeNzululwazi kwiKholeji yaseLondon, UDrew Kershen, UDupont Pioneer, U-Eric Sachs, Iofisi ye-FDA ye-biotechnology, Ifilimu yokusasaza yokutya, IProjekthi yokuFunda ngokuBhala, Iimpendulo zeGMO, UGraham Brooks, Henry Miller, Iziko leHoover, Ukulima iiHorticulture kunye neSayensi kwiYunivesithi yaseFlorida, IARC, Itekhnoloji yoLwazi kunye neSiseko se-Innovation, UJay Byrne, UJon Entine, UKarl Haro von Mogel, UKevin Folta, Ilabhoratri de Physiologie Cellulaire Végétale, UMarcel Kuntz, Matshi ngokuchasene neentsomi malunga nokuguqulwa, IPG Economics Ltd, UPiero Morandini, URobert McGregor, Ingqondo malunga neNzululwazi, ISyngenta, UC Davis, Yunivesithi yaseFlorida, IYunivesithi yase-Illinois e-Urbana-Champaign, IYunivesithi yaseMilan, IYunivesithi yase-Oklahoma College of Law, KwiYunivesithi yaseOxford, v -Ukusebenzisana okusebenzayo, Ixabiso leZipho, Vivian uMoses, UWayne Parrott, World Health Organization
I-Biofortified Aids yoShishino lweKhemikhali ye-PR kunye neenzame zokuLwela
IBiology Fortified Inc., eyaziwa ngokuba yi “Ukuhlaziywa, ”Ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo osebenza ngokusondeleyo nomzi mveliso wezolimo kunye nabasebenzisana nawo kubudlelwane boluntu kunye namaphulo okuphembelela ukukhusela ukutya okwenziwe ngemfuza kunye nemichiza yokubulala izitshabalalisi, kunye nokuhlasela abagxeki beshishini.
Amalungu eBhodi kunye neebhlogi zezona zinto zingumlingani ophambili kwezolimo
Amalungu ebhodi angoku kunye nababhali bebhlogi abadweliswe kwi-Biofortified's “dibana neengcali zethuIphepha linonxibelelwano olusondeleyo kwishishini lezolimo nakwimizamo yeqela elingaphambili.
Ilungu lebhodi langoku uDavid Tribe, i-geneticist kwiYunivesithi yaseMelbourne, eyasungulwa ngokubambisana Uphengululo lwezifundo, iqela eliphambili leMonsanto ezibanga ukuba zizimele ngelixa zifumana imali zeshishini. Amaxwebhu angaphakathi Chaza njani Uphengululo lwezifundo lwasekwa ngoncedo lweMonsanto ukuhlasela abagxeki beshishini. I-Tribe ibililungu lebhodi ye-Biofortified okoko kwasungulwa iqela ngo-2012.
U-co-founder wase-Biofortified kunye nelungu lebhodi langaphambili u-Pamela Ronald, i-geneticist e-UC Davis, naye wayeyilungu lebhodi IProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala, Umbutho weambrela kaJon Entine Iprojekthi ye-Genetic Literacy Project, iqela eliphambili kushishino lweekhemikhali. URonald ufumene imali yemizi-mveliso ukukhuthaza izityalo ezenziwe ngobunjineli; Yabona I-invoyisi eyi- $ 10,000 eBayer kwaye I-invoyisi eyi- $ 3,000 ukuya eMonsanto kwimirhumo yokuthetha.
Owayesakuba lilungu lebhodi ye-Biofortified uKevin Folta, usosayensi wezityalo kwiYunivesithi yaseFlorida, uncedisa kwimizi-mveliso yezolimo kwimizamo ye-PR kwaye ifumene imali zeshishini. [Uhlaziyo: I-Biofortified ibhengezwe nge-8/29/2018 bona unqumle ubudlelwane noFolta Ngokungqubana kwemicimbi yokuxela inzala.]
Umbhali webhlog ophicothiweyo USteve Savage, ishishini lezolimo umcebisi kwaye owayesakuba ngumqeshwa waseDuPont, kukhuthazwe ulwazi olungachanekanga malunga nentsalela yokubulala izitshabalalisi kukutya okuphilayo, ngokwe-Meyi ka-2018 column kwiPosi yaseWashington
Umbhali webhlog ophicothiweyo UJoe Ballenger ibikhona a Ikhontrakthi yeMonsanto.
Umbhali webhlog ophicothiweyo UAndrew Kniss wanikwa i “Isipho esingasikelwanga mda” NguMonsanto.
Okulandelayo yimizekelo yokulungelelanisa okuhambelana nomzi mveliso kunye neenzame zonxibelelwano noluntu ezibandakanya iBiofortified kunye neenkokheli zayo.
"Amakhwenkwe aphilisiweyo" Iqela elikhuselayo likhusela izitshabalalisi
Ngo-2013, i-Hawaii Crop Improvement Association (HCIA) -iqela lezorhwebo emele I-DowDuPont, i-Monsanto kunye ne-Hartung Brothers - baququzelele uhambo oluya e-Kauai ukulungiselela amahlakani oshishino ngokuchasene nommiselo woluntu owawunokuphucula ukubhengezwa esidlangalaleni yokusetyenziswa kwetyhefu yokubulala izinambuzane kunye nemimandla yesifunxi sephepha efunekayo kwizikolo, ezibhedlele nakwezinye iindawo zoluntu. Ngokweimeyile ezifunyenwe yi-US Right to Know, umlawuli olawulayo we-HCIA ubhekisele kubaxhasi abane ababemenyiwe kuhambo lwe-lobby njengamakhwenkwe “Aqinisekisiweyo. Babenjalo:
UKarl Haro von Mogel, Umlawuli wezenzululwazi
USteve Savage, Umbhali webhlog ophambili kunye nomcebisi kumzi mveliso wezolimo
UKevin Folta, Ilungu lebhodi yeBiofortified kunye noprofesa kwiYunivesithi yaseFlorida
UJon Entine, Umlawuli weProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala, iqela lamaqabane eMonsanto
Ii-imeyile zibonisa ukuba uRenee Kester, umququzeleli ophambili weprojekthi yokulinda i-HCIA, wathumela nge-imeyile la madoda mane Julayi 11, 2013 (iphepha 10) ukubabulela “ngayo yonke inkxaso enisinike yona apha eHawaii ngokubhekisele kwiimfazwe ezisandula ukwenziwa ngumthetho” nokumisela umnxeba wokuba kuxoxwe ngobukho babo ukuze bazimase iindibano zomthetho ezizayo. UAlicia Mulu Research, umlawuli olawulayo we-HCIA, emva koko eli qela (9 iphephamalunga nesidingo sokuyila izicwangciso zexesha elifutshane kunye nexesha elide "kusetyenziswa amakhwenkwe afunyanisiweyo":
ENew York Times, "UNjingalwazi waseFlorida usebenza noMzi mveliso weBiotech: Uhambo oluya eHawaii ukuya kungqina, kuhlawulwa nguShishino" (iphepha 23) (9/5/2015)
Ukubukela kweGM, “Indlela i'Biofortified Boys 'eyazikhusela ngayo iimfihlo zeshishini lokubulala izinambuzane eHawaii” (9/27/2015)
I-Biofortified efakwe kuluhlu "njengeqabane loshishino" kwi-Monsanto PR doc
le uxwebhu lwangaphakathi lweMonsanto ichonga i-Biofortified "njengeqabane lomzi-mveliso" kwisicwangciso sobudlelwane esidlangalaleni sikaMonsanto sokujongela phantsi ingalo yophando ngomhlaza yeWorld Health Organisation, iArhente yaMazwe yoPhando ngomhlaza (IARC), ukukhusela igama leRoundup weedkiller. Ngo-Matshi 2015, iphaneli yengcali ye-IARC yagweba i-glyphosate, eyona nto iphambili kwi-Roundup, ukuba ibe yiyo mhlawumbi i-carcinogenic ebantwini.
Uxwebhu lwe-Monsanto PR luchongiwe amanqanaba amane amaqabane eshishini Umbutho ucwangcise ukuzibandakanya "kwisicwangciso sokulungela" sengxelo yomhlaza we-IARC. I-Biofortified idweliswe kwi "Tier 2," kunye ne Uphengululo lwezifundo, Izifundo zeAgBioChatter, IProjekthi yokuFunda ngokuBhala kwaye Ingqondo malunga neNzululwazi. La maqela ahlala ekhankanywa njengemithombo ezimeleyo, kodwa njengoko isicwangciso seMonsanto kunye neminye imizekelo iphakamisa, basebenza ngasemva kunye nomzi mveliso wezolimo ukukhusela umdla wequmrhu. (Hlaziya: Ngo-Okthobha u-2018, iBiofortified yathumela mazwi Ukusuka eMonsanto besithi inkampani ayixhasi mali okanye ayisebenzisani nabo.)
Ukusebenza elubala okuchaseneyo kunye nezicelo zeFOIA
I-Biofortified co-sponsored, kunye ne Umanyano lweCornell lwezeNzululwazi, i Matshi 2015 uxwebhu lwezikhalazo ngokuchasene nokusetyenziswa kwezicelo zomthetho wenkululeko yolwazi (i-FOIA) izicelo zokuphanda unxibelelwano phakathi kwabahlohli abafumana inkxaso-mali kurhulumente kunye nomzi mveliso wezolimo.
Ii-imeyile ezifunyenwe lilungelo lase-US lokuFumana ulwazi ngezicelo ze-FOIA zikarhulumente zityhile oko imizekelo emininzi zabafundi abasebenza ngeendlela ezifihlakeleyo neenkampani zezolimo kunye neefemu zabo ze-PR ukunceda i-ajenda yokuloba kunye nokuthumela imiyalezo-umzekelo, amaxwebhu Ukuchaza imvelaphi yeqela eliphambili eliHlola iziFundo, kunye nabo baxoxa “ngamakhwenkwe afunyanisiweyo” uhambo lokungenisa abantu eHawaii. Uninzi lwee-imeyile ezifunyenwe yi-US Right to Know ngoku zithunyelwe kwi-UCSF Chemical Industry Documents Library, Ingqokelela yezoLimo zeUSRTK. Amaxwebhu avelise kwihlabathi liphela usasazo lweendaba malunga nokucaca kwishishini lokutya kunye nemingcipheko yezempilo kunye nokusingqongileyo kwemichiza yokubulala izitshabalalisi kunye nee-GMO.
Uhlaselo oluhambelana nomzi mveliso luka-Biofortified kubagxeki
Unodoli oxineneyo omele umbona we-GMO ogama linguFrank N. Foode ngumascot weBiofortified.
Ilungu lebhodi yokusekwa kweBiofortified uDavid Tribe esekwe ngokubambisana Uphengululo lwezifundoIqela eliphambili elasekwa ngoncedo lweMonsanto ukuhlasela abagxeki beshishini, ngokwamaxwebhu afunyenwe yi-US Right to Know. Kwi-imeyile enye, UJay Byrne, owayesakuba ngumlawuli wonxibelelwano lwenkampani eMonsanto, waxoxa uluhlu ekujoliswe kulo kubagxeki beshishini awayelungiselela iMonsanto.
Matshi ngokuchasene neentsomi malunga nokuguqulwa (MAMyths), iprojekthi ye-Biofortified, ikwajolise kwamanye amaqela kunye nabantu ababizwe kuluhlu ekujoliswe kulo ngu-Byrne- umzekelo, iqela lithathe inxaxheba uqhankqalaza ngokuchasene noVandana Shiva Kwaye kuthiwa ukhokele isilele ukuzama ukukwehla umsitho obonisa uVani Hari, "Ukutya Babe," exhaswe liZiko loKhuseleko loKutya.
Umsunguli we-MAMyths uKavin Senapathy wayenamanqaku aliqela isuswe nguForbes emva kokuba INew York Times ityhile ukuba umbhali-mbhali wakhe, uHenry Miller, wapapasha ikholamu Forbes eyayibhalwe ngumoya nguMonsanto. UMiller wachongwa njengeqabane kwi Isicwangciso sobudlelwane boluntu neMonsanto ukuhlasela iphaneli yomhlaza ye-IARC.
USenapathy ngumbhali-mbhali we-2015 incwadi malunga noHari, "Uloyiko Babe," olubonisa phambili ebhalwe lilungu lebhodi laseBiofortified uKevin Folta, apho achaza intshukumo yokutya "njengeqela labanqolobi elixhaswa ngemali."
USenapathy kunye noHaro von Mogel nabo bayavela kwi Ifilimu yepropaganda ye-GMO Ukuvela kokutya.
Iiprojekthi ezinxulumene noko
Indawo yogcino lwedatha luluhlu lwezifundo “ukubonisa abantu ukuba lungakanani uphando olwenziweyo kwizityalo ezenzelwe ubunjineli,” ngokuka FAQ kwiwebhusayithi yeBiofortified. Uluhlu luqale lwaqalwa nguDavid Tribe, naye owaseka i Ukuphononongwa kweMonsanto kwiqela eliphambili lezifundo. Ukunyuswa kwangaphambili kweGENERA ibango elilahlekisayo Ukubonisa "ngaphezulu kweengxelo ezingama-600 ezijongwe ngontanga kuncwadi lwezenzululwazi olubonisa ukhuseleko ngokubanzi kunye nokutya okunesondlo kokutya kwe-GM kunye nokutya." Uninzi lwezi zifundo aluzange luchaze imiba yezokhuseleko. Ulwimi oluchanekileyo lokukhuthaza lwasuswa kamva, kunye nesiqingatha sesifundo.
Ukutya kwengqondo, GMO, Uphando lwethu, Pesticides Uphengululo lwezifundo, Izifundo zeAgBioChatter, UAlicia Mulu Uphando, UAndrew Kniss, Bayer, Amakhwenkwe afunyanisiweyo, ICornell Alliance yeNzululwazi, UDavid Tribe, DowDuPont, dupont, Ifilimu yokusasaza yokutya, UFrank N. Foode, JIKELELE, IProjekthi yokuFunda ngokuBhala, IHCIA, IARC, iqabane kushishino, UJay Byrne, UJoe Ballenger, UJon Entine, UKarl Haro von Mogel, UKavin Senapathy, UKevin Folta, Matshi ngokuchasene neentsomi malunga nokuguqulwa, IMonsanto, Pamela Ronald, Ukuhlaziya uKester, Iprojekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala yeNzululwazi, Ingqondo malunga neNzululwazi, USteve Savage, ISyngenta, UC Davis, Yunivesithi yaseFlorida, KwiYunivesithi yaseMelbourne, World Health Organization
Iziko lamaQabane okuQiniseka kokuTya neMonsanto
IZiko loQinisekiso lokutya (i-CFI), eyayisakuba yi-Grow America Project, li-501 (c) (4) elixhaswe ngemali lishishini elenza uphando, ukucebisa kunye nemikhankaso yobudlelwane noluntu ukuze "ithembele kubathengi" ngokutya nakwiinkampani zezolimo, kuquka DowDuPont, Monsanto, Cargill, Costco, Grocery Manufacturers Association, Hershey, Kroger kunye nemibutho yorhwebo yenyama, yobisi kunye neembotyi zesoya.
Kwisithuba seminyaka emihlanu ukusuka 2012-2016, I-CFI ichithe i-23,225,098 yeedola kwiintengiso ezahlukeneyo kunye nemiyalezo iinkqubo ukukhuthaza umyalezo wemizi-mveliso ukwakha ukuthembela kukutya okuyimfuza, amayeza okubulala izitshabalalisi, izongezo zokutya kunye nokubulala iintsholongwane kwinyama.
ICFI's 501 (c) (3) ingalo, the Isiseko soManyano lokutya, imali yophando yokwazisa ngemizamo yemiyalezo yokwakha ukuthembela kwabathengi, ngohlahlo-lwabiwo mali lwe- $ 823,167 ukusuka 2012-2016. Abaxhasi kwi2012 yayiquka iNkampani yeMonsanto, iCropLife America kunye ne-US Farmers and Ranchers Alliance.
"Iqabane lomzi mveliso" kuhlaselo lukaMonsanto kwipaneli yomhlaza ye-IARC
le uxwebhu lwangaphakathi lweMonsanto ichonga iZiko lokuDityaniswa kokutya njenge "qabane lomzi mveliso" kwisicwangciso sobudlelane esidlangalaleni sikaMonsanto sokujongela phantsi ingalo yophando ngomhlaza yeWorld Health Organisation, iArhente yaMazwe yoPhando ngomhlaza (IARC), ukukhusela igama leRoundup weedkiller. Ngo-Matshi 2015, i-IARC yagweba i-glyphosate, eyona nto iphambili kwi-Roundup, ukuba ibe yiyo mhlawumbi i-carcinogenic ebantwini.
Uluhlu lwesicwangciso seMonsanto amanqanaba amane amaqabane eshishini ukuzibandakanya kwiinzame zonxibelelwano noluntu. I-CFI idweliswe njengeQela lesi-3 “iqabane lomzi mveliso” kunye namanye amaqela amabini axhaswa ngezimali kukutya, i IBhunga leLizwe loLwazi lokutya kwaye i Umbutho wabavelisi bokutya.
Ngokwalo xwebhu, la maqela ebeyinxalenye ye "Iqela lokubandakanyeka kwabachaphazelekayo" elinokwazisa iinkampani zokutya "ngesicwangciso sokutofa" sikaMonsanto ukubonelela ngemfundo malunga namanqanaba e-glyphosate kunye "nokuchaza izifundo ezisekwe kwisayensi xa kuthelekiswa ne-ajenda eqhutywa yi-ajenda" yomhlaza ozimeleyo. iphaneli.
Jonga ubambiswano lweMpuma / CMA neMonsanto kunye neProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala
I-CEO yeZiko lokuDibanisa ukuTya, uCharlie Arnot, ukwayi-CEO ye Jonga eMpuma (eyayisakuba yi-CMA), i-PR kunye ne-arhente yonxibelelwano yokutya kunye nezolimo. Izivumelwano zeCFI neJonga eMpuma ngeenkonzo zolawulo lweprojekthi, ngokweefom zerhafu.
Inkampani ka-Arnot PR nayo isebenza neMonsanto, ngokwamaxwebhu afunyenweyo ngu-US Ilungelo lokwazi. Ngo-2014, iMonsanto yathintela i-CMA "Ukuthengisa" kunye nokukhuthaza uthotho lwemigaqo-nkqubo ye-pro-GMO ethi isigqeba seMonsanto sanikwa oonjingalwazi kwaye salungiselela ukuba siyipapashe kwiwebhusayithi yeProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala - ngaphandle kokuxelwa kwendima kaMonsanto ngasemva kwezehlo, njenge I-Boston Globe ixelwe.
The IProjekthi yokuFunda ngokuBhala, elinye iqela leqabane loshishino elichazwe kwisicwangciso se-Monsanto se-PR sokuhlazisa i-IARC, ikwafumana inkxaso-mali kwiZiko lokuDibana kokutya, ngokwe-GLP yakutshanje kwaye ngokufuthi “iphepha elisebenza elubala”
Ukutya kwengqondo, GMO, Uphando lwethu, Pesticides Cargill, Iziko lokuDibana kokutya, UCharlie Arnot, CMA, Costco, CropLife Melika, DowDuPont, Isiseko soManyano lokutya, IProjekthi yokuFunda ngokuBhala, Umbutho wabavelisi bokutya, Ukukhulisa iProjekthi yaseMelika, Hershey, IARC, IBhunga leLizwe loLwazi lokutya, Kroger, Jonga eMpuma, IMonsanto, Abalimi baseMelika kunye noManyano lweRanchers, World Health Organization
UDrew Kershen: Icandelo leZolimo eliPhambili kwiQela leKhonkco
ezaposwa ngomhla Ngamana 1, 2018 by UStacy Malkan
UDrew Kershen, Unjingalwazi ovela kwiYunivesithi yase-Oklahoma College of Law, ngumhlobo osondeleyo kwishishini lezolimo. Uxoxa ngokuba uhlengahlengiso zezityalo ezenziwe ngobunjineli kunye nezilwanyana kunye ngokuchasene nokubekwa elubala. U-Kershen udlale indima ephambili kwishishini lezolimo elixhaswe ngemali kwimizamo yokuxhasa kunye namaqela angaphambili alwela umdla wezorhwebo. UKershen akayichazi imithombo yenkxaso-mali.
Ubudlelwane kwezolimo kunye nobunkokeli beqela langaphambili
Iprojekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala / iProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala yeSayensi
IKershen yi ilungu lebhodi yeProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala, liqela elingaphambili elisebenzisana neMonsanto ukwenza ubudlelwane boluntu ngokutya okwenziwe ngemfuza kunye nemichiza yokubulala izitshabalalisi, kwaye iyakwenza ayichazi ngokuchanekileyo inkxaso-mali yayo. Amaxwebhu abonisa ukuba iProjekthi ye-Genetic Literacy Project:
"liqabane loshishino" ngokwemfihlo Uxwebhu lweMonsanto PR Echaza izicwangciso zama ukuhlambalaza izazinzulu zomhlaza ze-Arhente yeHlabathi yezeMpilo yoPhando ngomhlaza;
yi "indawo yepropaganda”Kunye nomdlali ophambili kwiMonsanto inethiwekhi yokuphembelela, ngophando olwenziwe kwi- Le Monde;
ipapashe uthotho lwe-pro-GMO amaphepha ezifundo ezazikhona wabelwe kwaye wanyuselwa yiMonsanto ngaphandle kokuxela malunga nendima yequmrhu;
babambisene noPhononongo lwezeMfundo ukuqhuba iinkomfa zebhayiti yenkampu yeBiotech Literacy ungathembeki malunga nenkxaso mali kushishino, Ngokwengxelo kwi Inkqubela phambili.
UKershen ukwalilungu lebhodi le Iprojekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala yeNzululwazi, 501 (c) (3) umbutho wabazali weProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala. Zombini zikhokelwa ngu UJon Entine, umhlobo wexesha elide we-PR kwishishini lamachiza.
Ngoku ka Iirekhodi zerhafu ka-2015, UJon Entine kunye neProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala bathathe ulawulo lweNkonzo yoVavanyo yezeNkcukacha-manani (i-STATS), iqela elalikade lidibene neCentre for Media and Public Affairs (CMPA) kunye IProjekthi yokuFunda ngokuBhala. Ukusebenza kwe-STATS kwafakwa kwi-Sense malunga neSayensi ye-USA, yona wabelana ngedilesi enye yengxelo ngeProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala yeSayensi.
Abasunguli be-STATS, i-CMPA kunye ne-Sense malunga neNzululwazi benza ubudlelwane bezoluntu basebenzela umzi mveliso wecuba kwaye la maqela awangabo abalamli abazimeleyo besayensi, ngokwe-2016 uphando kwi-Intercept.
Ngolwazi oluthe kratya, jonga kwi-USRTK sheet sheet UJon Entine kunye neProjekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala kwaye Ingqondo malunga neSayensi / STATS.
UNobhala woPhononongo lweziFundo lweQela eliPhambili
UKershen wayengunobhala webhodi yabalawuli yoPhononongo lwezeMfundo, ngokwe yayo Iirekhodi zerhafu ka-2016. UPhononongo lweziFundo lubanga ukuba liqela elizimeleyo, kodwa amaxwebhu afunyenwe yi-US Right to Know kutyhilwe ukuba liqela langaphambili Ukusekwa ngoncedo lweMonsanto ukuhlasela abagxeki beshishini lezolimo ngelixa babonakala ngathi bazimele.
UKershen waye umbuyekezi Ingxelo ka-2014 yoPhononongo lweziFundo eyayizame ukujongela phantsi ishishini lezinto eziphilayo; i upapasho ndaba zekhampani Ingxelo ibanga ukuba ngumsebenzi wezifundo ezizimeleyo ngaphandle kwengxabano yomdla.
Iirekhodi zerhafu zibonisa ukuba oyena mxhasi uphambili woPhononongo lwezeMfundo yayiliBhunga loLwazi lweBiotechnology, umbutho ongenzi nzuzo oxhaswa ngezimali nolawulwa yi-BASF, Bayer, DowDuPont, Monsanto naseSyngenta. I-CBI inike i $ 600,000 iyonke kuVavanyo lweZifundo kwi 2014 kwaye 2015-2016.
Kutheni iForbes isusa amanye amaNqaku eKershen
IKershen ubhale amanqaku aliqela ezacinywa nguForbes kunye neProjekthi Syndicate emva kombhali-mbhali, UHenry Miller, wabanjwa usebenzisa ikholamu ebhalwe ghost nguMonsanto njengomsebenzi wakhe eForbes. Inkqubo ye- ENew York Times Utyhile isiphoso sokubhala ghost ngo-2017.
UKershen noMiller nabo babhale amanqaku Slate, Uhlolo lweSizwe, i Iziko leHoover kwaye i Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo (ishishini elixhaswa ngemali iqela eliphambilibethetha ngokuchasene neelebheli kunye nokulawulwa kokutya okunobunjineli, ukuhlasela abagxeki bemizi-mveliso, kunye nokubanga ukuba "amahlwempu ehlabathi ayabandezeleka kwaye asweleke ngokungeyomfuneko" ngenxa "yomgaqo wesisa ofunwa ngabaphembeleli."
UKershen ngu “Ingcali yonozakuzaku” yeempendulo zeGMO, a intengiso kunye newebhusayithi ye-PR ngokutya okuveliswe yimfuza oko kukuthi Ixhaswe ngemali ziinkampani ezinkulu zezolimo ngokudlula kwiBhunga leeNkcukacha zeBiotechnology, kwaye ziqhutywa ngu inkampani yezonxibelelwano noluntu uKetchum.
Ungenelele kwi-Transparency Lawsuit yokucinezela ukuBhengezwa koLuntu
Amaxwebhu aliqela axeliweyo kweli xwebhu, athe abhenca ubudlelwane obungachazwanga phakathi kweenkampani kunye namaqela angaphambili, aqala afunyanwa ngenkululeko yezicelo zoLwazi ngu Ilungelo lase-US lokwazi. U-Kershen ungenelele kwizimangalo ukuzama ukuyeka ukubhengeza ngakumbi, njenge Nkululeko yeQonga leendaba ingxelo ngoFebruwari 2018.
Ngolwazi oluthe kratya malunga namaqela angaphambili emveliso yokutya, bona Iphepha lophando lwe-USRTK.
Ukutya kwengqondo, Uphando lwethu, Pesticides Uphengululo lwezifundo, Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, I-BASF, Bayer, Inkampu ye-Biotech Literacy Camp, Iziko leMithombo yeendaba kunye neMicimbi yoLuntu, IBhunga leNgcaciso yeBiotechnology, DowDuPont, UDrew Kershen, FOIA, Forbes, IProjekthi yokuFunda ngokuBhala, Isiporho, Iimpendulo zeGMO, Henry Miller, Iziko leHoover, IARC, UJon Entine, UKetchum, Iprojekthi yoLwazi lokuFunda nokuBhala yeNzululwazi, Ingqondo malunga neNzululwazi, Inkonzo yoVavanyo lwezeNkcukacha-manani, ISyngenta, IYunivesithi yase-Oklahoma College of Law, World Health Organization
IMonsanto ithi izinambuzane zayo zikhuselekile. Ngoku, inkundla ifuna ukubona ubungqina
Iziganeko zale veki ziya kuphawula ixesha lokuqala apho inzululwazi esetyenziselwa ukuthethelela izitshabalalisi ezithile ziya kuhlaziywa phantsi kwesifungo kubo bonke abantu.
Eli nqaku lapapashwa okokuqala kwi Guardian.
NgoMvulo, inkundla yomanyano eSan Francisco izakukhanyisa uluntu kwinzululwazi ejikeleze ukhuseleko lwenye yezona zinambuzane zisetyenziswa kakhulu emhlabeni, ikhemikhali yokubulala ukhula ebizwa ngokuba yi glyphosate edibene nomhlaza kwaye ifunyanwa kwindawo yethu ukutya namanzi, nakwifayile yethu ulwelo lomzimba wakho. Ngenxa yobubanzi bempilo kunye nokusingqongileyo okunxulumene nokusetyenziswa kwesi sibulali zinambuzane, kuya kuba kuhle ukuba sinikwe ingqalelo.
Njengesithako esisebenzayo kwi-Roundup enophawu lukaMonsanto kunye namakhulu ezinye izilwanyana zokubulala ukhula, i-glyphosate imele zigidi zeedola Kwingeniso yonyaka yeMonsanto kunye nezinye iinkampani, kwaye isetyenziswa kakhulu ngamafama njengoncedo kwimveliso yokutya. Kukwathandwa zizixeko zokugcina iipaki zikawonkewonke kunye neendawo zokudlala ngaphandle kokhula, nangabanini bamakhaya abafuna ingca ecocekileyo. Kodwa imichiza yathathwa njenge Isidumbu somntu ziingcali zomhlaza zoMbutho wezeMpilo weHlabathi kwi2015 ekufumaneni oko kuye kwabangela oko amaza okuzibophelela ematyaleni ngokuchasene neMonsanto.
Iingxoxo ezishushu malunga nokhuseleko - okanye ukusilela kwayo - kwezi zinambuzane zithandwayo ziye zanda emhlabeni jikelele kwaye zabangela iimfazwe zepropaganda icala ngalinye libanga ukuba elinye lithethe kakubi ngengxelo yesayensi. Amaxhoba omhlaza athetha ukuba iMonsanto inayo "Ghost" ebhaliweyo uphononongo lophando, abalawuli abanefuthe ngokungafanelekanga kunye namaqela angaphambili abanga ubuxoki kukhuseleko lwe-glyphosate. IMonsanto, okwangoku, iqinisekisa izifundo ezininzi ngoososayensi bamanye amazwe iphosakele kwaye inezopolitiko, kwaye ithi izifundo zeshishini zibonisa ukuba imveliso ikhuselekile xa isetyenziswa njengoko bekucwangcisiwe.
Iziganeko zale veki ziya kuphawula okokuqala ukuba uphando, ezinye ebeziqokelela uthuli kwiijenali ezizele zenzululwazi okanye kwiifayile ezihlanganisiweyo eziyimfihlo, ziya kuhlaziywa phantsi kwesifungo kubo bonke abantu.
Asinto yokwenza umthambo. Ubomi bokwenyani busemngciphekweni woku kunye neengxoxo ezibanzi malunga nemingcipheko yokubulala izitshabalalisi kwimpilo yethu. Inye kumadoda amabini kwaye enye kuwo onke amabhinqa amathathu ngoku kulindeleke ukuba baphuhlise umhlaza ebomini babo kwaye Umhlaza wobuntwana unyuka.
Kubantwana, ukubonakaliswa kwemichiza yokubulala izinambuzane akunxibelelananga nje kuphela Umhlaza wabantwana, kodwa ukunciphisa umsebenzi wokuqonda, kunye neengxaki zokuziphatha. Kubantu abadala, izitshabalalisi zinxulunyaniswa non-Hodgkin's lymphoma, leukemia, brain, prostate kunye nezinye iicancer. Ngaphezulu kwama-3,000 abamangali abamangalela iMonsanto betyhila ukubakho kwe-glyphosate esekwe kwi-Roundup yabangela ukuba bona okanye amalungu osapho lwabo baphuhlise i-non-Hodgkin's lymphoma.
IMonsanto izame ukweyisela umgwebi wase-US uVince Chhabria ukuba alahle isimangalo, kwaye wafuna ukugcina imfihlo kumaxwebhu angaphakathi anyanzelwayo ukuba aguqulwe xa kufunyanwa. Kodwa u-Chhabria uyalele ukuba ukumanyelwa kube ividiyo erekhodiweyo kwaye kwabelwana ngayo esidlangalaleni kwi-intanethi. Kwaye uye wenjenjalo unikwe imvume yabamangali ukuba baphonononge kwinkundla evulekileyo izinto ezinje ngokubhalwa kwesiporho kwinzululwazi ngokunjalo Isifundo esiphikisayo ngo-1983 ukuba izazinzulu ze-EPA ngelo xesha zathi zibonisa ubungqina bokubangela umhlaza obunokubangela umhlaza.
Inkundla ibize iminyhadala ye-5-9 ka-Matshi njenge "veki yesayensi" kuba kuphela kobungqina obuzakubekwa buza kuvela iingcali zesayensi yomhlaza, kubandakanya izifo zeentsholongwane, iingcali zetyhefu kunye nabanye kubizwe ukuhlalutya uphando olufanelekileyo. Akusayi kubakho kulila amaxhoba omhlaza wokutsala imitya yentliziyo; amacala aphikisayo abonisa isayensi kwijaji eya kuthi ithathe isigqibo sokuba ityala liya phambili na.
Ukomeleza ukhuselo lwayo, inkampani kunye nabadibaniselwano bemveliso yeekhemikhali bebenjalo esebenzela ukuhlazisa izazinzulu zomhlaza kunye nabanye ebelumkisa ngengozi. Ezo nzame zaqaqanjiswa xa amalungu ekomiti yeNdlu yesayensi, indawo kunye netekhnoloji wabamba isimangalo eWashington ngomhla we-6 kuFebruwari ukubhengeza izikhalazo zikaMonsanto malunga ne-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza (IARC) yokuhlelwa kwe-glyphosate njenge-carcinogen enokwenzeka, kunye nokusongela ukuhlutha inkxaso-mali kumzimba wezenzululwazi.
Umzamo wekomiti-ngokuguqula imfazwe yomhlaza kwimfazwe kwisayensi yomhlaza-wayenjalo liqhwatyelwe izandla ngumzi mveliso weekhemikhali. IMonsanto, kunye ne-lobbyist CropLife America kunye neminye imibutho yezolimo, nayo wamangalela California ukuyeka abalawuli bendalo esingqongileyo ukuba bafune izilumkiso zomhlaza kwiimveliso zeglyphosate, kwaye nge-26 kaFebruwari bona uphumelele isigwebo ukuvimba isilumkiso esinjalo.
Ingxoxo-mpikiswano malunga ne-glyphosate kodwa ngumzekelo wakutshanje wendlela iinzame zeshishini zihlala zingagxili ekujongeni ubungqina bezenzululwazi malunga nokwenzakala, kodwa ekugxekeni inzululwazi ekhubekisayo. Kunyaka ophelileyo, umzekelo, iDow Chemical yacela ngempumelelo inkokheli yeArhente yoKhuselo lweNdalo ngoyaba izilumkiso ezivela kwizazinzulu zayo (kunye nabanye) malunga nophando olunzulu olubopha isitshabalalisi seDow esinenzuzo esibizwa ngokuba yi-chlorpyrifos kwiingxaki zokukhula kwengqondo ebantwaneni.
Ukunikezelwa esidlangalaleni kobungqina beengcali eSan Francisco malunga nokusasazeka kwesibulali zinambuzane esasasazeke kakhulu eMonsanto kunika ithuba elibalulekileyo lokwahlula inzululwazi kwi-spin. Sonke kufuneka sibukele.
Ukutya kwengqondo, Pesticides UCarey Gillam, CropLife Melika, IDow Chemical, glyphosate, Guardian, IARC, IMonsanto, World Health Organization
U-Kate Kelland weReuters ukhuthaze ingxelo engeyonyani malunga ne-IARC kunye no-Aaron Blair
ezaposwa ngomhla Julayi 24, 2017 by UStacy Malkan
QAPHELA uJanuwari 2019: Amaxwebhu afakwe enkundleni bonisa ukuba iMonsanto ubonelelwe nguKate Kelland kunye namaxwebhu ebali lakhe likaJuni 2017 malunga noAaron Blair kwaye wamnika isilayidi somgangatho wamanqaku okuthetha inkampani ifuna ukugqunywa. Ngolwazi oluthe kratya, bona Isithuba sikaKhathaleli sokuLinga ukuLandela iTracker Gillam.
Olu hlalutyo lulandelayo lwenziwa nguCarey Gillam kwaye lwathunyelwa ngoJuni 28, 2017:
NgoJuni 14, 2017 Reuters inqaku Umbhali kaKate Kelland, onesihloko esithi "I-arhente yomhlaza ye-WHO ishiye ubumnyama ngaphezulu kobungqina be-glyphosate," watyhola ngokungalunganga isazinzulu somhlaza ngokubamba idatha ebalulekileyo kuvavanyo lokhuseleko lwe-glyphosate olwenziwe yi-Arhente yeHlabathi yoPhando ngomhlaza (IARC).
Ibali likaKelland liqulethe iimpazamo eziyinyani kwaye lichaza izigqibo eziphikisanayo ngokufundwa ngokupheleleyo kwamaxwebhu awakhankanye njengemithombo ephambili. Kuyaphawuleka ukuba uKelland akabonisanga khonkco kumaxwebhu awakhankanyileyo, isenza ukuba abafundi bangaziboneli ngokwabo ukuba ubewela kude kangakanani ngokuchaneka ekutolikeni kwabo. Inkqubo ye- uxwebhu olusisiseko iphikisana ngokucacileyo nebali likaKelland. Amaxwebhu ongezelelweyo ibali lakhe ekubhekiswa kulo, kodwa alikhange linxibelelane, linokufumaneka ekupheleni kwesi sithuba.
Imvelaphi: Ibali leReuters lelinye kuthotho lwamaqhekeza abalulekileyo apapashwe yiarhente yeendaba malunga ne-IARC eyabhalwa nguKelland emva kokuba IARC yahlulahlula i-glyphosate njenge Isidumbu somntu kweyoKwindla ngo-2015. IGlyphosate yichiza lokubulala iintsholongwane elinenzuzo enkulu esetyenziswa njengeyona nto iphambili ekubulaweni kokhula iMonsanto's Roundup, kunye namakhulu ezinye iimveliso ezithengiswa kwihlabathi jikelele. Ukwahlulwa-hlulwa kwe-IARC kubangele ukumangalelwa kwabantu abaninzi e-United States beziswe ngabantu betyholwa ukuba umhlaza wabo ubangelwe yi-Roundup, kwaye yanyanzela i-European Union kunye nabalawuli base-US ukuba bandise ukuvavanya kwabo imichiza. Ukuphendula kuhlelo lwe-IARC, nanjengendlela yokuzikhusela ngokuchasene nokumangalela kunye nokuxhasa inkxaso yolawulo, iMonsanto ifake izikhalazo ezininzi ngokuchasene ne-IARC efuna ukukujongela phantsi ukuthembeka kwe-IARC. Ibali likaJell 14 likaKelland, elalicaphula isigqeba esiphezulu seMonsanto “sobuchule”, laqinisa ezo nzame zobuqhinga kwaye zagxothwa nguMonsanto kunye nabanye kwimizi-mveliso yamachiza njengobungqina bokuba udidi lwe-IARC lwalungalunganga.
Ukukhutshwa kwesazinzulu u-Aaron Blair, uyilo olungenabungqina kunye nonxibelelwano nge-imeyile kwibali lakhe "njengamaxwebhu enkundla" yayingengawo amaxwebhu enkundla kodwa ayengamaxwebhu ayenziwe afunyanwa njengenxalenye yokufunyanwa kwezimangalo ezibandakanya amaxhoba omhlaza Ukumangalela uMonsanto. Amaxwebhu agcinwe kwiqela lezomthetho laseMonsanto kunye neqela lezomthetho labamangali. Jonga i-docket yase-US yeNkundla yeSithili sase-Northern California, ityala elikhokelayo 3: 16-md-02741-VC. Ukuba iMonsanto okanye i-surrogate inikezele ngamaxwebhu ku-Kelland, ukufunwa okunjalo bekufanele ukuba kuchaziwe. Ngenxa yokuba amaxwebhu engafunyanwa yinkundla, njengoko ibali likaKelland lisitsho, kubonakala ngathi iMonsanto okanye abalinganiswa batyale umgca webali kwaye banika uKelland amaxwebhu, okanye ubuncinci iinxalenye ezikhethiweyo zamaxwebhu, kunye novavanyo lwawo.
Inqaku likaKelland linika amagqabantshintshi kunye notoliko lobungqina bukaBob Tarone, ochazwa nguKelland “njengozimeleyo kwiMonsanto.” Ukanti ulwazi ibonelelwe yi-IARC Iseka ukuba iTarone isebenze njengomcebisi ohlawulelweyo eMonsanto kwiinzame zayo zokuhlazisa i-IARC.
I-Reuters ihlekise eli bali ngale ngxelo: "Isazinzulu esikhokele kolo hlaziyo besazi ngedatha entsha engabonisi ikhonkco lomhlaza- kodwa khange ayikhankanye kwaye iarhente ayikhange iyithathele ngqalelo." UKelland wathetha ukuba uGqirha Blair wayefihla ngabom ulwazi olubalulekileyo. Nangona kunjalo ukubekwa kubonisa ukuba uBlair wangqina ukuba idatha ekubhekiswa kuyo "ayikakulungeli" ukungeniswa kwiphephancwadi ukuze lipapashwe kwaye ngekhe ivunyelwe ukuba iqwalaselwe yi-IARC kuba ibingekagqitywa kwaye ipapashiwe. Ininzi yedatha yaqokelelwa njengenxalenye yoFundo lwezeMpilo lwezoLimo lwaseMelika kwaye ibiya kongezwa kwiminyaka eliqela yolwazi olupapashwe ngaphambili oluvela kwi-AHS olungabonisi manyano phakathi kwe-glyphosate kunye ne-non-Hodgkin lymphoma. Igqwetha laseMonsanto labuza uBlair malunga nokuba kutheni le nto idatha ingashicilelwanga ngexesha eliza kuthathelwa ingqalelo yi-IARC, isithi: “Ugqibe ekubeni, nangasiphi na isizathu, ukuba loo datha ayizukupapashwa ngeloxesha, kwaye ke ayithathelwa ngqalelo IARC, ichanekile? ” UBlair uphendule wathi: “Hayi. Uyayingcolisa le nkqubo. ” “Into esigqibe ngayo ngumsebenzi ebesiwenza kwezi zifundo zahlukileyo awukabikho - bebengekakulungeli ukungeniswa kwiijenali. Kwanasemva kokuba uthathe isigqibo sokuzingenisa kwiijenali ukuze ziphononongwe, awunakugqiba ukuba ipapashwa nini. ” (Iphepha elikhutshelweyo likaBlair iphepha lama-259) UBlair ukwathe negqwetha laseMonsanto: “Into engenakuziphendulela kukukhawulezisa into engakhange ihlahlelwe ngokupheleleyo okanye icingwe” (iphepha 204).
U-Blair uphinde wangqina ukuba enye idatha evela kwi-AHS engagqitywanga, engapapashwa "ibingabalulekanga ngokwezibalo" (iphepha le-173 lediphozithi). U-Blair uphinde wangqina koku kubekwa malunga nedatha ebonisa unxibelelwano olomeleleyo phakathi kwe-glyphosate kunye ne-NHL nayo engakhange ibhengezwe kwi-IARC kuba ayizange ipapashwe.
UBlair ungqinile ukuba enye idatha evela kufundo lweProjekthi eManyeneyo yaseMelika ibonise ubudlelwane obomeleleyo kakhulu kunye ne-NHL kunye ne-glyphosate, ephindwe kabini kunye nokuphindeka kathathu komngcipheko onxulumene nesibulala-zinambuzane esibonwe kubantu abasebenzisa i-glyphosate ngaphezulu kokuphindwe kabini ngonyaka. Kanye njengedatha ye-AHS, le datha ayikhange ipapashwe okanye inikwe i-IARC (iphepha 274-283 yediphozithi yaseBlair).
Inqaku likaKelland likwathi: “U-Blair ukwathe idatha ibizokutshintsha uhlalutyo lwe-IARC. Uthe ngeyenze ukuba kungabikho amathuba okuba i-glyphosate ihlangabezane ne-arhente yokuchazwa 'njenge-carcinogenic.' ”Obo bungqina (kwiphepha le-177-189 lokukhutshwa) abuxhasi kwaphela ezo ngxelo. Ekugqibeleni uBlair uthi "mhlawumbi" ekubuzeni kwigqwetha likaMonsanto ebuza ukuba ngaba idatha ye-AHS ka-2013 ibandakanyiwe kuhlalutyo lwe-meta-data ye-epidemiology ethathelwa ingqalelo yi-IARC, ukuba loo nto "ngeyinciphisile umngcipheko we-meta-relative to glyphosate and non-Hodgkin lymphoma nangaphezulu… ”Ibali likaKelland likwashiya umbono wokuba le datha ye-epidemiology engashicilelwanga evela kuphononongo olungagqitywanga ibiya kuba kukutshintsha umdlalo kwi-IARC. Ngapha koko, ukufunda ukufakwa ngokupheleleyo, kunye nokuthelekisa nengxelo ye-IARC kwi-glyphosate, kugxininisa ubuxoki nokulahlekisa loo mbono. UBlair wangqina kuphela kwidatha yesifo se-epidemiology kwaye i-IARC yayisele ibubonile ubungqina besi sifo ukuba babubona ngathi "bunqunyelwe." Ukwahlulahlulwa kwayo kwe-glyphosate kwabona ukubaluleka kwidatha yezilwanyana (inetyhefu) eyayijongileyo, ikubona "yanele".
UKelland akahoyi iinxalenye ezibalulekileyo zediphozithi yaseBlair ethe ngqo kuphando olupapashiweyo luka-2003 olwafumanisa ukuba “bekukho ukuphindeka kabini komngcipheko we-non-Hodgkin's lymphoma kubantu abaye bavezwa yi-glyphosate” (iphepha 54-55 lwediphozithi).
UKelland akabunaki ubungqina kwidiphozithi yaseBlair malunga "neepesenti ezingama-300 ezandayo zomngcipheko" womhlaza kuphando lwaseSweden (iphepha lama-60 lokukhutshwa).
Ukufunda yonke into ebekiweyo kubonisa ukuba uBlair wangqina ngemizekelo emininzi yezifundo ezibonisa umanyano olungileyo phakathi kwe-glyphosate kunye nomhlaza, zonke ezo uKelland angazinanzanga.
UKelland ubhala ukuba kubungqina bakhe bezomthetho, u-Blair ukwachaze i-AHS njenge "inamandla" kwaye wavuma ukuba idatha ayibonisi kunxibelelana nomhlaza. Wayethetha ukuba wayethetha ngedatha ye-2013 engashicilelwanga kwi-NHL kunye ne-glyphosate eyisiqwengana solwazi olufunyenwe kwi-AHS, xa ubungqina bubonisa ukuba wayethetha ngesambrela esikhulu somsebenzi se-AHS, esasilandela iintsapho zasezifama. Ukuqokelela idatha kwisininzi semichiza yokubulala izitshabalalisi iminyaka eliqela. Eyona nto wayithethayo uBlair malunga ne-AHS ebanzi yile: “Sisifundo esinamandla. Kwaye inezibonelelo. Andiqinisekanga ukuba ndingathi lelona linamandla, kodwa sisifundo esinamandla. ” (iphepha 286 lokukhutshwa kwemali)
Ngapha koko, xa wayethetha ngokuthe ngqo ngedatha ye-AHS ka-2013 kwi-glyphosate kunye ne-NHL, uBlair waqinisekisa ukuba idatha engapapashwanga ifuna "ukutolikwa okulumkileyo" ngenxa yenani lamatyala abonakalisiweyo kumaqela amancinci "ayemancinci" (iphepha 289).
U-Kelland uthi "IARC uxelele iReuters ukuba, ngaphandle kobukho bedatha entsha malunga ne-glyphosate, yayihambelana neziphumo zayo," iphakamisa isimo sengqondo se-cavalier. Ingxelo enjalo ilahlekisa ngokupheleleyo. Yintoni iARC enyanisweni wathi yayikukuziqhelanisa nokungaqwalaseli iziphumo ezingapapashwanga kwaye inokuphinda ivavanye izinto xa umzimba omkhulu wedatha entsha upapashwa kuncwadi.
Inkcazo enxulumene noko:
I-Monsanto Spin Oogqirha Iithagethi zoMhlaza weSayensi kwiFlared Reuters Story, NguCarey Gillam (ngoJuni 2017)
IiReuters Vs. I-Arhente yoMhlaza yeZizwe eziManyeneyo: Ngaba amaqhina amaShishini aphembelela ukuGqalwa kweNzululwazi? NguStacy Malkan (ngoJulayi 2017)
Amabango amaninzi alahlekisayo malunga ne-IARC uxelwe kwiReuters nguKate Kelland, USRTK (Okthobha 2017)
Ukuhanjiswa kwevidiyo ka-Aaron Earl Blair, Ph.D., Matshi 20, 2017
Umboniso # 1
Umboniso # 2
Umboniso # 3
Umboniso # 4
Umboniso # 5
Umboniso # 6
Umboniso # 7
Umboniso # 9
Umboniso # 10
Umboniso # 11
Umboniso # 12
Umboniso # 13
Umboniso # 14
Umboniso # 15
Umboniso # 16
Umboniso # 17
Umboniso # 18
Umboniso # 19A
Umboniso # 19B
Umboniso # 20
Umboniso # 21
Umboniso # 22
Umboniso # 23
Umboniso # 24
Umboniso # 25
Umboniso # 26
Umboniso # 27
Umboniso # 28
Pesticides UAaron Blair, UAlan Boobis, I-American Chemistry Council, Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, Angelo Moretto, Bayer, UBob Tarone, Coca Cola, ICropLife yaMazwe ngaMazwe, dupont, I-arhente yeekhemikhali yaseYurophu, IGunya loKhuseleko loKutya laseYurophu, UFiona Fox, UGeoffrey Kabat, glyphosate, IARC, Imperial College yaseLondon, I-Arhente yamazwe ngamazwe okuPhando ngeCarcer, IZiko leHlabathi le-Epidemiology, IZiko lezeNzululwazi ngezoBomi leHlabathi, UKate Kelland, Mike Williams, IMonsanto, UPaulo Boffetta, Reuters, Iziko leMedia Media, Ingqondo malunga neNzululwazi, Ukuhanjiswa kweSt, World Health Organization